Abiy oo soo saaray farriin guul-darro iyo Tigrayga oo qabsaday magaalo kale | Dalkaan.com
Home Warkii Abiy oo soo saaray farriin guul-darro iyo Tigrayga oo qabsaday magaalo kale
Abiy oo soo saaray farriin guul-darro iyo Tigrayga oo qabsaday magaalo kale
Dessie (dalkaan) – Ciidamada Tigray-ga ayaa Axaddii ku dhowaaqay inay qabsadeen magaalo muhiim ah oo ku taalla waqooyiga Ethiopia, hase yeeshee dowladda ayaa beenisay ayada oo sheegtay inay “dagaal xooggan kaga jirto magaalooyinka Kombolcha iyo Dessie.”
Haddii la xaqiijiyo qabsashada Kombalcha, oo imaneysa maalin kadib markii mucaaradka ay sheegeen inay qabsadeen Dessie, waxay ka tarjumi doontaa horumar deg deg ah oo ay TPLF ka sameeyeen dagaalka muddada sanadka ah socda.
“Si buuxda ayaan u maamuleynaa Komblacha,” waxaa sidaas yiri afhayeenka TPLF Getachew Reda oo qoraal soo dhigay , taasi oo ka dhiggan duulaan weyn oo ay qadaeen mucaaradka kadib markii ay inta badan gobolka Tigray kasoo saareen ciidamada federaalka bishii June.
Hase yeeshee afhayeenka dowladda Legesse Tulu ayaa shir jaraa’id ku sheegay “in dagaal xooggan uu ka socdo Dessie iyo Kombolcha.”
Getachew ayaa sheegay in TPLF “aysan laheyn wax ujeedo ah oo aan ka aheyn inay go’doominta ka qaado” gobolka Tigray, oo ay ka jirto xaalad bani’aadamanimo oo daran.
Gudaha Kombolcha, Semira oo ah 36 jir degan magaalada, ayaa sheegtay inay ciidamada mucaaradka Axaddii ku aragtay waddooyinka kadib markii ay kusoo tukatay masjid.
“Waxaan sidoo kale arkay ciidamo baabuuro uga baxaya magaalada,” ayey u sheegtay AFP.
Dukaan iibiye ku sugan magaalada oo magaciisa kusoo koobay Hamdiu ayaa sidoo kale sheegay inuu arkay ciidamada dowladda federaalka Ethiopia oo baabuuro xamuul ah uga baxaya magaalada.
Qoraal uu soo dhigay , ayaa ra’iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu shacabka Ethiopia ugu baaqay inay “qaataan nooc kasta oo hub ah oo ay heli karaan, si ay joojiyaan kooxda TPLF.”
Previous articleMuxuu Lafta Gareen ka yeeli doonaa qorshaha Shariifka?
Next articleDoorashada Golaha Shacabka oo maanta ka bilaabaneysa Muqdisho
Daawo: Waalidiinta afar wiil oo bada lagu waayey lix bilood ka...
Muqdisho (Caasimada Online)-Waxaa maanta xeebta Liido warbaahinta kula hadlay waalidiinta afar wiil oo lix bilood ka hor lagu waayey xeebta Liido ee magaalada Muqdisho,...
Paris Saint-Germain oo wadahadalo la furtay Zinedine Zidane.
Horudhac: Manchester United Vs Arsenal Kulanka Derbiga ee Horyaalka Premier League-ga,...